တစ်ဦးကအိမ်ဖေါ်တစ်ဦးသူနာပြုမဟုတ်ပါဘူး. တစ်ဦးကအိမ်ဖေါ်သက်ကြီးရွယ်အိုများစောင့်ရှောက်တာကိုတချို့အတှေ့အကွုံရှိစေခြင်းငှါ, နေမကောင်းအသက်သို့မဟုတ်မသန်စွမ်း, ဒါပေမယ့်သူမတစ်ဦးသူနာပြုမဟုတ်ပါဘူး. သူမသည်လုံလောက်စွာထိုသူတို့အဘို့ဂရုစိုက်ဖို့သင့်လျော်သောသင်တန်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကင်းမဲ့. သို့သော်များစွာသောအလုပ်ရှင်များကလွယ်ကူသော option ကိုရှေးခယျြ - လူအပေါင်းတို့သည်အိမ်မှုကိစ္စအိမ်မှုဝေယျာလုပ်ဖို့အိမ်ဖေါ်ငှားရမ်းနှင့်သူမ၏တက်နှစ်ဆမိမိတို့၏အသက်မိဘများဂရုစိုက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်မသန်စွမ်း. ဒီအစီအစဉျကိုကျေနပ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်. အဆိုပါအိမ်ဖော်မကြာမီထွက်မီးရှို့ရာရရှိ; နှင့်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်နေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူသို့မဟုတ်သူမထိုက်တန်ပါတယ်အပြည့်အဝအာရုံစိုက်မှုရပါဘူး.
တွေ့ဆုံသက်သက်မာ - အဆိုပါစောင့်ရှောက်သူများ
ဒီအသက်သက်မာဖြစ်ပါတယ်. သူမသည်များအတွက်စင်္ကာပူမှာနေတဲ့အိမ်ဖော်အဖြစ်အောင်မြင်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်5ယခုအနှစ်. အတိတ်ကာလအဘို့6လအတွင်းသူမ H.O.M.E မှာအတန်းမတက်ရောက်ခဲ့ပြီး. တစ်ဦးစောင့်ရှောက်သူများအဖြစ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခံရဖို့. သူမသည်ဘွဲ့ရများနှင့်ယခုသက်ကြီးရွယ်အိုများစောင့်ရှောက်တာကိုအလုပ်တစ်ခုအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
သူမ၏များကဲ့သို့အများအပြားကပိုရှိပါတယ်. MyHelper သည် H.O.M.E. နှင့်လက်တွဲနေသည်။, N2 Hub လေ့ကျင့်ရေးအကယ်ဒမီနှင့်အခြားစောင့်ရှောက်သူများလေ့ကျင့်ရေးစင်တာများသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများအားစောင့်ရှောက်ရန်အိမ်ဖော်လိုအပ်သောအလုပ်ရှင်များကိုကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်သည်. သင်တစ်ဦးအိမ်ဖေါ်ထက်ပိုပြီးလိုအပ်သည့်အခါ, သင်တစ်ဦးစောင့်ရှောက်သူများလိုအပ်. /my(ကစောင့်ရှောက်သူများကသင့်ချစ်ရသူအဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုတွေ့မြင်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ).
eldercare အတွေ့အကြုံကို (မျှလက်မှတ်များ) နှင့်အတူအိမ်ဖော်များအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ